Lookbooks – Concrete Jungle Blog
Designer Lookbooks from Zimbabwe
Fashion, Lookbooks, Online Shopping, Travel, Zimbabwe
Making a “Proudly Zimbabwean” statement with @AmaZimZim_ZW 2017 collection
The flag, That Flag of Zimbabwe is now commonly known as #ThisFlag, can no longer we worn as a scarf, as 2016 revealed a rebellion associated with wearing it as a scarf. So how can we show off Zimbabwe, even as a souvenir to tourist.
Meet AMAZIMZIM, or simply AMZZ A Zimbabwean clothing line that says, I am a Zimbabwean, in a proud manner. Continue reading “Making a “Proudly Zimbabwean” statement with @AmaZimZim_ZW 2017 collection”
TatendaRobin 07-June-17 9:26:25 07-June-17 9:26:28 Leave a comment
Harare – The African fabric fashion wave is not going anywhere, one can say ZUVVA by Joyce Chimanye made the African Print trend go mainstream couture, although the NOLLYWOOD boom did make the attire a personal favourite. Continue reading “New ONLINE SHOP “ChicStreet” in #Zimbabwe”
TatendaRobin 12-July-14 2:18:02 25-April-15 3:26:36 Leave a comment
Fashion, Lookbooks, Online Shopping
#Equality: Whether Curvy or Skinny LOOK GOOD #NakimuliInc
HARARE – Totally love this label I found on Instagram this morning, it embraces both plus size and straight size women. Unlike other designers that punish women of bigger sizes with bigger prices, Nakamuli is all about loving whichever shape and form you come in. Continue reading “#Equality: Whether Curvy or Skinny LOOK GOOD #NakimuliInc”
TatendaRobin 26-June-14 1:02:31 25-April-15 3:26:47 Leave a comment